Fianarana Pulse Digital Marketing 2013 | Martech Zone
Zoma, Septambra 27, 2013 Zoma, Septambra 27, 2013 Douglas Karr
Torotoro izahay. Ny tsy fahampian'ny fahaizana sy ny fiofanana, ny rafitra sy ny fizotran'ny fandaminana tsy mifanaraka amin'ny laoniny, ary ny fomba fanao lova efa raiki-tampisaka no mampikatso ny mpivarotra ankehitriny. Ireo fitaovana sy teknolojia dia mivoatra sy mipoitra isan-kerinandro - saingy tsy ampy izany. Izany no antony lehibe nanombohanay Highbridge… Ny mpanjifanay dia mila fampisondrotana fotsiny mba hanampiana azy ireo handroso ary hampihatra amin'ny fomba mahomby ny teti-bolan'ny marketing amin'ny tetikady rehetra.
Ny fahitana ato amin'ity lahatsoratra ity dia nalaina avy amin'ny traikefa niasa mivantana niarahana tamin'ny mpitantana marika sy mpivarotra, fanadihadiana natao ho an'ny mpitarika marketing efa ho 200 (Finch Brands sy Netplus Digital Pulse Study, Aogositra 2013), ary andiana dinidinika nifanaovana tamin'ireo olona miasa amin'ity habakabaka ity isan'andro. Ny valim-pikarohana dia naneho mazava tsara fa tonga ny fotoana tokony hampijanonan'ny mpivarotra mody tsy voafehy ny zava-drehetra. Miankina aminy ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny marika azon'izy ireo.
Inona no sahirana ataon'ny ekipanao? Ahoana no fomba hialanao amin'ireo fanamby ireo? Vakio manontolo ny lahatsoratra Netplus ho an'ny fanapahan-kevitr'izy ireo.
Tags: Hafanàm-po an-barotrafianarana marketing nomerikamarika finchfikarohana momba ny varotrafanadihadiana momba ny varotranet plus
Varotra varotra IBM Smarter: sehatra Social Analytics an-tsehatra